Bezos နှင့် Amazon တို့သည်လက်လီလောက - WorldRef ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သနည်း
Venkatesh Shankar, တက္ကဆက် A & M တက္ကသိုလ်
Amazon ကဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်ကိုကြေငြာခဲ့သည် ဆင်းနင်းသည် ဖောက်သည်များထံသို့စာအုပ်ရောင်းရန်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပြီးနောက် ၂၇ နှစ်နီးပါးတွင်စီအီးအိုအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည် dial-up modem များ.
Amazon ကဒီလိုမဟုတ်ဘူး ပထမ ဦး ဆုံးစာအုပ်ဆိုင် အွန်လိုင်းမှာရောင်းချင်ပေမဲ့အဲဒါဟာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး။ " ၎င်းကိုပထမဆုံးဖွင့်သောအခါကုမ္ပဏီ၏ဆီယက်တဲလ်ဌာနချုပ်တွင်ခေါင်းလောင်းမြည်လိမ့်မည် အခါတိုင်းအမိန့်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းတွင်ခေါင်းလောင်းမြည်နေသဖြင့် ၀ န်ထမ်းများက၎င်းအားပိတ်ထားရသည်။
ဒါပေမယ့်ဘီဇို့စ်ကကုမ္ပဏီမှာဆက်နေ ဦး မှာပဲ။ သူ၏မျက်စိမြင်စေ အဲဒါကိုတစ် ဦး "အရာအားလုံးစတိုးဆိုင်။ " အောင်အပေါ် လက်လီရောင်းဝယ်မှုတွင်လွှမ်းမိုးမှုရရှိပြီးနောက်ကုမ္ပဏီသည် ဆက်လက်၍ ဖြစ်လာသည် ကျယ်ပြန့်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစုကြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြောက်မြားစွာလိုင်း၌တည်၏။
ယနေ့အမေဇုံသည် တတိယတန်ဖိုးအရှိဆုံးအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ - Apple နှင့် Microsoft တို့၏နောက်ကွယ်တွင် - ဈေးကွက်အရင်းအနှီးနှင့်အတူ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၇ ထရီလီယံဝန်းကျင်, စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ထက်သာ။ ကြီးမြတ် အားလုံးတစ်ဒါဇင်သို့မဟုတ်ဒီတော့နိုင်ငံများမှ၏။
၁၉၉၄၊ ဇူလိုင် ၅ ရက်တွင်အမေဇုံမတည်ထောင်မီစျေးဝယ်သူများသည်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ရန်စတိုးဆိုင်များသို့သွားခဲ့ရသည်။ စျေး ၀ ယ်ထွက်ခြင်းမှာခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ လိုချင်သောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်၊ လမ်းခရီးများစွာကိုလှည့်လည်ရှာဖွေခြင်း၊ ငိုယိုခြင်း၊ ယနေ့တွင်စတိုးဆိုင်များသည်စျေးဝယ်သူများနှင့်မည်သည့်နေရာ၊ အချိန်မရွေး၊ ချန်နယ်အမျိုးမျိုးနှင့်ကိရိယာများမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားသည်။
Amazon ၏ ၀ န်ထမ်းအဖွဲ့ ၀ င်အစီအစဉ်မှနှစ်ရက်ကြာအခမဲ့ရေကြောင်းခရီးကိုပထမဆုံးကြုံတွေ့ပြီးနောက်စျေးဝယ်သူများသည်အွန်လိုင်းလက်လီအရောင်းဆိုင်များအားလုံးထံမှမမျှော်လင့်ဘဲစတင်လာကြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဝယ်ယူသူ ၁၄၂ သန်းရှိသည် အမေဇုံချုပ်ရှိသည်.
ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များမှတစ်ဆင့်စျေးဝယ်ခြင်းကို ပို၍ အဆင်ပြေစေသည် တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်; ကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်များ၊ အမေဇုံအချက်အချာနှင့် Locker မှာအထုပ်ပစ်ကပ်; ထုတ်ကုန်မှာယူသည် Dash ခလုတ်တစ်ခုတည်းဖြင့်ထိပါ; နှင့် အမေဇုံ Key နှင့်အတူအိမ်မှာပေးပို့.
စျေးဝယ်သူများသည်ရိုးရိုးအသံ command မှတစ်ဆင့် Echo သို့သို့မဟုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းများရှာဖွေနိုင်သည် Instagram ကို or Pinterest ပုံ အမေဇုံ၌ပင်တစ် ဦး ရှိပါတယ် ငွေကိုင် -“ Go” စတိုး ဆီယက်တဲလ်တွင်။
အမေဇုံသည်လက်လီရောင်းဝယ်မှုအပြောင်းအလဲနှင့်အမီလိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသောအုတ်များနှင့်မော်တာစတိုးဆိုင်များပိုမိုများပြားလာခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကူးစက်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီကပင်စတိုးဆိုင်များသည်ထူးခြားသည့်နှုန်းဖြင့်ပိတ်ထားကြပြီးလေ့လာသုံးသပ်သူများကလာမည့်အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်သည်။လက်လီ Apocalypse။ " အမေဇုံသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအမေရိကန်အမြောက်အများအကျိုးအမြတ်ခံစားခဲ့ရသဖြင့်အမေရိကန်အများစုသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံခဲ့ရပြီးသုံးစွဲသူများကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များသို့သွားခြင်းဖြင့်သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ပြုမည့်အစားကုန်ပစ္စည်းများကိုအွန်လိုင်းတွင်မှာယူခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
အမေဇုံ၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်း နှစ်ဆနီးပါးရှိပါတယ် သော့ခတ်ကတည်းကပင်အဖြစ်, မတ်လ 2020 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည် လက်လီအရောင်းဆိုင် ၁၁၀၀၀ ကျော်ကသူတို့တံခါးများကိုပိတ်လိုက်သည်.
အမေဇုံ၏သက်ရောက်မှု အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအထိတိုးချဲ့Alexa ကဲ့သို့သော smart စားသုံးသူစက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င် Amazon ၀ န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ cloud service များနှင့်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များကဲ့သို့နည်းပညာထုတ်ကုန်များအပါအ ၀ င်။
ထိုကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းကစားသမားများနှင့်လေ့လာသူများအသုံးပြုသော Amazon ၏သက်ရောက်မှုသည် “ Amazoned” ဟူသောအသုံးအနှုန်း အမေဇုံကြောင့်နှောင့်ယှက်ခံရသည့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံနှင့်လုပ်ငန်းများကိုဖော်ပြရန်။
ယနေ့အမေဇုံသည် ဒုတိယအကြီးဆုံးအမေရိကန်အခြေစိုက်အများပိုင်စာရင်း ၀ င်အလုပ်ရှင် နှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပဉ္စမအကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်လူ ဦး ရေ ၁.၂ သန်းရှိသည် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်း ၄၂၇၀၀၀ ကိုငှားရမ်းခဲ့သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကအမေဇုံသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ၎င်း၏ဒုတိယဌာနချုပ်တည်နေရာ။ ဒါဟာ နောက်ဆုံးတော့ကောက်ယူ Arlington, ဗာဂျီးနီးယား။
အမေဇုံရဲ့အလုပ်ယဉ်ကျေးမှုကပြင်းထန်တယ် ဒါဟာအဖြစ်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ် မြင့်မားသောဝန်ထမ်း burnout မှုနှုန်းနှင့်အတူ cutthroat ပတ်ဝန်းကျင်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် တတ်နိုင်သမျှအများအပြားအလုပ်အကိုင်များအလိုအလျောက်အများအားဖြင့်ဂိုဒေါင်ထဲမှာ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မူဝါဒချမှတ်သူများအားဝေဖန်မှုများအပြီးတွင် Amazon သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အရှိန်မြှင့်ခဲ့ပြီး US ၀ န်ထမ်းများအနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာတိုးမြှင့်ခဲ့သည် တစ်နာရီကို $ 15.
Amazon ၏သေတ္တာများနှင့်အခြားထုပ်ပိုးပစ္စည်းများပတ် ၀ န်းကျင်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုများကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ Amazon ကလည်းကတိပေးခဲ့သည် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်.
ဘီဇို့စ်ကဘယ်သူလဲ Amazon ရဲ့အမှုဆောင်ဥက္ကchairman္ဌအဖြစ်ဆက်လုပ်သွားမှာပါယခင်ကမိမိအအာရုံကပြောပါတယ် အမေဇုံကိုမသေစေဖို့တားဆီးနေတယ်။ သူသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အားလုံးလက်တွဲအစည်းအဝေးတွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း“ အမေဇုံသည်ကျရှုံးရန်ကြီးမားလွန်းသည်။ ”
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ပါမောက္ခအဖြစ် သူသည်အွန်လိုင်းလက်လီရောင်းဝယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရာနှင့်ချီသောဖြစ်ရပ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ အမေဇုံ၏အနာဂတ် - နှင့်လူသား၏ဖြစ်စဉ်သည်အတုဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်မြင့်တက်မှုနှင့်မတိမ်းမယိမ်းဆက်နွယ်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဖြင့်စတင်ခြင်း Alexa, ကုမ္ပဏီရဲ့ virtual လက်ထောက်, Amazon က AI ကိုလောင်းနေသည်။
တကယ်တော့, အမေဇုံကစောင့်ကြိုနေတဲ့ရေကြောင်းကိုစမ်းသပ်နေတယ်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စျေးဝယ်သူများအဘယ်အရာလိုအပ်သည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးစျေးဝယ်သူများကမမှာကြားမီထိုပစ္စည်းများကိုစာပို့သည်။ စျေးဝယ်သူများသည်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးသူတို့မလိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ငွေရှင်းကောင်တာများနှင့်လောင်းကစားများလည်းပြုလုပ်သည် AI-powered အိမ်စက်ရုပ်.
အမေဇုံ၏အနာဂတ်အောင်မြင်မှုသည် ၀ င်ရောက်လာသည့်စီအီးအို - လက်ရှိ cloud computing အကြီးအကဲ Andy Jassy - ထိုနည်းပညာအသစ်များကိုမည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများသို့ ၀ င်ရောက်ရန်တွန်းအားပေးသည်အပေါ်မူတည်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှု.
သူ၏စိန်ခေါ်မှုမှာ Bezos ၏အမွေအနှစ်နှင့်အမေဇုံ၏နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးနေသောယဉ်ကျေးမှုကိုရှင်သန်စေရန်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာအသစ်ပြင်ဆင်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်သည် မူရင်းထုတ်ဝေဆောင်းပါး ဇူလိုင်လ 3, 2019 ပေါ်မှာ။
Venkatesh Shankar, Coleman သဘာပတိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပါမောက္ခနှင့်သုတေသနဒါရိုက်တာ, တက္ကဆက် A & M တက္ကသိုလ်